Bạn muốn mua chip - 베트남어 - 버마어 번역 및 예문
검색어: bạn muốn mua chip (베트남어 - 버마어)
Bạn muốn báo cáo vấn đề loại nào?
Bạn muốn làm gì? Các lựa chọn là:
သင်ဘာလုပ်လိုပါသလဲ။ သင်၏ရွေးချယ်မှု့များကတော့ -
Bạn muốn bỏ các tập tin đã chọn hay bổ sung chúng nó vào dự án mới?
ဖိုင်များကို ပရောဂျက်အသစ်မှာ အသုံးပြုမလား
Bạn muốn tạo ra một đĩa với nội dung của tập tin ảnh đĩa hay chỉ để chép tập tin ảnh đĩa thôi?
Các bạn muốn trách móc tiếng nói sao? Song lời của một người ngã lòng chỉ như luồng gió.
ငါစကားပြောရုံကာမျှကို အပြစ်တင်မည်ကြံစည်ကြသလော။ မြော်လင့်စရာမရှိသောသူ ပြောသော စကားသည် လေသက်သက်ဖြစ်၏။
마지막 업데이트: 2012-05-04
Vậy bây giờ, nếu các bạn muốn, hãy ngó tôi, Tôi nào dám nói dối trước mặt các bạn đâu.
ငါ့ကိုစိတ်မရှိဘဲကြည့်ရှုကြပါလော့။ သင်တို့ရှေ့ မှာ ငါလှည့်စားသလော။
Vua Ða-vít nói cùng Oït-nan rằng: Không, thật ta muốn mua nó theo giá bạc thật nó; vì ta chẳng muốn lấy vật gì của ngươi mà dâng cho Ðức Giê-hô-va cũng không muốn dâng của lễ thiêu chẳng tốn chi cả.
ဒါဝိဒ်မင်းကြီးက၊ ထိုသို့ငါမယူရ။ စင်စစ်အဘိုး ထိုက်သည်အတိုင်း ပေး၍ငါဝယ်မည်။ သင့်ဥစ္စာကို ထာဝရဘုရားအဘို့ ငါမသိမ်း။ ကိုယ်ငွေမကုန်ဘဲ မီးရှို့ရာ ယဇ်ကို မပူဇော်လိုဟု အရောနအားဆိုသဖြင့်၊
Vua đáp cùng A-rau-na rằng: không không được; ta muốn mua hết của ngươi, cứ theo giá bạc. Ta không muốn dâng cho Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ta những của lễ thiêu không đáng giá chi. Vậy, Ða-vít mua sân đạp lúa và bò giá năm mươi siếc lơ bạc.
ရှင်ဘုရင်ကလည်း၊ ထိုသို့ငါမယူရ။ စင်စစ်အဘိုးပေး၍ ငါဝယ်မည်။ ကိုယ်ငွေမကုန်ဘဲငါ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားအား မီးရှို့ရာယဇ်ကို ငါမပူဇော်လိုဟု အရောနအား ဆိုသဖြင့်၊ ငွေအကျပ်ငါးဆယ်ကို ပေး၍၊ ထိုကောက်နယ်တလင်းနှင့် နွားတို့ကို ဝယ်ပြီးမှ၊
propedêutico (포르투갈어>영어)epz (영어>체코어)dostosowany (폴란드어>스페인어)i wish i can understand (영어>타갈로그어)beeld (네덜란드어>리투아니아어)brennervorrichtung (독일어>영어)compunctio cordis (라틴어>영어)a sior (프랑스어>영어)wie (독일어>이탈리아어)amnesty (영어>벵골어)servaverunt (라틴어>독일어)hebræernes (덴마크어>체코어)buku program (말레이어>영어)vent (영어>타갈로그어)diseased (영어>타이어)shops (영어>체코어)baliw (타갈로그어>영어)或许你并不像你自己想象的那么聪明 (중국어(간체자)>말레이어)pagsisisi prayer (타갈로그어>영어)gerrards (영어>프랑스어)botbot (타갈로그어>영어)vzdycky (체코어>독일어)right virai veekam (타밀어>영어)serumundersøgelse (덴마크어>프랑스어)in somnia (헝가리어>영어)